Ny Galaxy Watch dia amidy amin'ny fomba ofisialy any Espana | Androidsis
Iray volana lasa izay no nitrangan'ny hetsika fampisehoana ny Galaxy Note 9, izay nametrahan'i Samsung vaovao vaovao isan-karazany koa. Ny iray amin'ireo zava-baovao amin'ity hetsika ity dia ny fiambenana vaovao an'ny orinasa, ny Galaxy Watch. Miaraka amin'ity modely ity, ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famantaranandro vaovao, miaraka amina endrika sy famaritana hafa.
Araka ny fantatrao angamba, mahita kinova maromaro amin'ity Galaxy Watch ity izahay, fa tonga any Espana daholo izy ireo. Manomboka androany dia azo atao ny mividy ny iray amin'ireo kinova amin'ny Samsung smart watch eto amin'ny firenentsika ireo, ary fantatray ny vidin'ny varotra.
Antenaina fa tsy ho mora vidy ireo maodely ireo, fa ny tena marina dia farafaharatsiny mba tsy te-hametraka ny tenany ao anatin'ny faritra avo loatra izy ireo. Modely somary lafo izy ireo, nefa miaraka amin'ny vidiny mirary. Farafaharatsiny raha raisinay ho kajikajy ireo masontsivana izay. Manana kinova kely izahay, 42 mm ny savaivony ary 46 mm lehibe. Ireto ny vidiny miankina amin'ny kinova:
Fijerena Galaxy 42mm: 309 euro
42mm savaivony Galaxy Watch miaraka amin'ny 4G LTE: 379 euro
46mm savaivony Samsung Galaxy Watch: 329 euro
46mm savaivony Galaxy Watch miaraka amin'ny 4G LTE: 399 euro
Safidy efatra hisafidianana amin'ny fandefasana azy any Espana. Inona koa, modely miaraka amin'ny LTE dia mifanaraka amin'ny mpitatitra rehetra izay manana eSIM. Ka io dia afaka manampy ireo kinova amin'ny famantaranandro hanana varotra na fanekena tsara kokoa eo amin'ireo mpampiasa.
Ity famantaranandro Samsung ity dia azo amidy amin'ny mpivarotra mahazatra, miaraka amin'ny teboka ara-batana amidy na an-tserasera. Afaka mandeha any amin'ny magazay toa an'i FNAC, Corte Inglés na safidy an-tserasera toa an'i Amazon ianao. Amin'izy rehetra ireo dia ho hitanao ity famantaranandro vaovao ity avy amin'ny orinasa koreana. Ahoana ny hevitrao momba ny famantaranandro? Ahoana ny hevitrao amin'ny vidiny?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ny Samsung Galaxy Watch dia misy any Espana izao
Arovy ny balaonina tianao indrindra amin'ny vidiny rehetra amin'ny Rise up